ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
စိမ်းလန်းသော တောတောင်များနှင့် သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်များဖြင့် ပြည့်စုံနေသော ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးသည် သဘာဝ၏ အလှအပများအားရှာဖွေရန် ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် ပြီး ပြည့်စုံသည့် နေရာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ၎င်းဒေသသို့ သွားရောက်ရန် အချိန် ၂ နာရီခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းသော အခြေအနေများရှိခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည်သည့်များ အပန်းဖြေအနားယူရန်အတွက် ၎င်းဒေသသို့ လာရောက်မှု များပြားပါသည်။ စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ အားလပ်ရက်များတွင် ကမ်းခြေများသို့ ၎င်းဒေသနှင့် အလွန်မဝေးသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်များလည်း လာရောက်လည် ပတ်ကြပါသည်။ ကမ်းခြေများ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် မြင်ကွင်းဖြစ်သော အပြာရောင်ကောင်းကင်အောက်ရှိ ကြည် လင်နေသော ရေပြင်သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား ဆွဲဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများ ပေါကြွယ်ဝသော လူမျိုးစုများ နေထိုင်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ဖူးမျှော်ခြင်း၊ ဆင်များအား လေ့လာခြင်း၊ ရွက်လွှင့်ခြင်း ကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ပျော်ရွှင်စရာ စွန့်စားမှုများကို လာရောက်ပြုလုပ်ရန်လည်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှ ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဗမာ၊ ရခိုင်၊ အင်ဒီးယန်းလူမျိုးများနှင့် ကရင်လူမျိုးများ အတူတကွ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ တို့ကို အများဆုံး ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဒေသခံများသည် မြန်မာစကား/ဗမာစကားကို အဓိကထား ပြောကြပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၃၅,၁၄၀ ကီလိုမီတာ ၂/၁၃,၅၇၀ စတုရန်းမီတာ ရှိပြီး ပဲခူတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်တို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး အပူပိုင်းဒေသ မိုးများသော ရာသီဥတုနှင့် အပူပိုင်းဒေသ အမြဲ စိမ်းလန်း သော ရာသီဥတုများ ရှိပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ အားလုံးထက် လူဦးရေ နေထိုင်မှုသည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး (၂၀၁၄) တွင် လူဦးရေ ၆.၁၈၄ သန်း ရှိပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွက် များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်သော သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိအကြီးမားဆုံးမြစ်၏ အလှအပများကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ခံစားကြည့်ရှုခြင်း
ဧရာဝတီမြစ်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တလျှောက် အက်ဒမန်ပင်လယ်အထိ စီးဆင်းပြီး ရှားပါး တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဂေဟစနစ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်သောမြေသြဇာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ မြစ်လက်တက်များအဖြစ် ခွဲဖြာစီးဆင်းနေပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တလျှောက် နှုန်းမြေများ၊ လမုတောနှင့် ရွှံ့နွံတောများသည် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိ သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ဆောင်းခို ငှက်များ လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၌ လာရောက် ကျက်စား လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် ပင်လယ်ငှက်များ၊ ခေါင်းညို စင်ရော်ငှက်များ၊ ရေကြက်များ၊ ဘဲငန်းများနှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များကို မြစ်ဝကျွန်း ပေါ်တလျှောက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် အာရှဆင်များသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အရေအတွက် လျော့နည်းလာသော်လည်း ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ကျက်စား ကြပုံများကို ခရီးသွားဧည့်သည်များ လေ့လာနိုင်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ တောင်ဘက် ပိုင်းတွင် မိချောင်းများ ကျင်လည်ကျက်စားကြပြီး အာရှဆင်များကဲ့သို့ပင် အရေအတွက် လျော့နည်းကာ အနည်းငယ်ပင် ကျန်ရှိတော့သည်။ ထို့အပြင် ခရီးသွားဧည့်သည် များအနေနှင့် ရှားပါးသောသမင်မျိုးစိတ်များနှင့် တောဝက်များကို ကြည့်ရှုလေ့လာ နိုင်သည့် အပြင် ကျားသစ်၊ ကျားများ၊ ပင်လယ်လိပ်များကဲ့သို့ ရှားပါးမျိုးစိတ်များကိုလည်း ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ တွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်တွင် ကျက်စားနေထိုင်ကြသောကြောင့် ‘ဧရာဝတီလင်းပိုင်’ ဟုခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဧရာဝတီမြစ်ကို အခြေပြု၍ ဝမ်းစာအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ ရသော ငါးဖမ်းသမားများနှင့် သိသာထင်ရှားသော အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးများရှိသည်။ ၎င်းတို့က ငါးဖမ်းသမားများ၏ ငါးဖမ်းပိုက်များဆီသို့ ငါးများကို ဝင်ရောက်စေရန် လုပ်ဆောင် ပေးပြီး ငါးဖမ်းသမားများကလည်း ဖမ်းဆီးရရှိသည့် ငါးများကို ဧရာဝတီ လင်းပိုင်များအား ပြန်လည်ကျွေးမွေးကြသည်။ လင်းပိုင်များနှင့် လူတို့အကြား ဤကဲ့သို့ ထူးခြားသော ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများသည် လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ထူးဆန်းအံ့အားသင့်စေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ နေထိုင် ကျက်စား ရာနိုင်ငံအများစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရပ်ရွာအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းကို စတင် လုပ်ဆောင်ခြင်း အပါအဝင် မျိုးစိတ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရေးအထိပါ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း ရရှိနိုင်သည့် အတွေ့အကြုံများမှာ ဧရာဝတီလင်းပိုင်များအား လေ့လာခြင်း၊ လှေခရီးစဉ် များ၊ ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးစဉ်များ၊ ငါးဖမ်းပိုက်ပြုလုပ်ပုံများနှင့် သားရဲတိရစ္ဆာန်များအား လေ့လာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ဒေသခံများက ရိုးရာနည်းလမ်း အတိုင်း ငါးဖမ်းခြင်းကို လေ့လာသည့်အတွက် ငါးဖမ်းသမားများသည် လင်းပိုင်များကို ခေါ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့စီးနှင်းထားသည့် ကနူးလှေ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကို ရိုက်၍ အသံပေးကြရသည်။ ထိုအခါ လင်းပိုင်များသည် ငါးဖမ်းသမားများကို ငါးဖမ်းရာတွင် ကူညီရန် လာရောက်ကြပြီး စူးစမ်းလေ့လာရန် ရောက်ရှိနေကြသည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များအား ကြိုဆိုသည့်ပုံစံများ၊ လှေအနီးအနားတွင် လှည့်ပတ်ရေးကူးကြခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြသည့် အတွက် ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွေ့အကြုံကို ရရှိစေပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းသော ကမ်းခြေများနှင့် အပန်းဖြေနေရာများကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားပါသည်။ သန့်ရှင်းကြည်လင်လှသည့် ပင်လယ် ရေ၊ သဲသောင်ကမ်းခြေများနှင့် ပင်လယ်လေကောင်းလေသန့်များသည် အားလပ်ရက်အချိန် များကို ပင်လယ်ကမ်းခြေ၌ ကောင်းမွန်သော ခံစားချက်များဖြင့် ကုန်ဆုံးချင်သူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ကမ်းခြေများသည် အလုပ်၏ ဖိအားများကို ခံနေရသူများအတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အရွယ်အမျိုးမျိုးသော ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အတူ နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးကမ်းခြေအတွေ့အကြုံများထဲက တစ်ခုကို ခံစားရစေနိုင်သည့် လူသိများသော အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုရှိပါသည်။ ကမ်းခြေများသည် အပန်းဖြေရာတွင် သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်ရန်အတွက် အခြားပြည်နယ်ဒေသများမှ ဒေသခံများကိုပါ ဆွဲဆောင်ပါသည်။ ဤဒေသသည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ကမ်းခြေ တွင် နေဝင်ဆည်းဆာ ကိုကြည့်ရှုရင်း ကောင်းမွန်သော အနံ့အရသာနှင့်ပြည်စုံသည့် ဟင်းလျာ များကို သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကမ်းခြေများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရသည်ကို ကြိုက် နှစ်သက်သူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပိုမိုလှပသော ကမ်းခြေများကို ထပ်မံရှာဖွေလျက်ရှိသောကြောင့် နောင်တွင် လူသိနည်းပြီး အလှတရားများ ဖုံးကွယ်လျက်ရှိသော ကမ်းခြေများကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်ရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ ရရှိရန် ကြိုးပမ်း ခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များ အနေဖြင့် မထိတွေ့ရ သေးသော ပင်လယ်ကမ်းခြေများဆီသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ မည်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့်လည်း ၎င်း ခရီးစဉ်ဒေသအသစ်များ
တွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် Guest House များ၊ ဟိုတယ်များတွင် နေထိုင်အပန်းဖြေနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
FLOURISHING RIVER DELTA
The river flows throughadelta before reaching the Andaman Sea, making the delta fertile withapacked ecosystem and rare animal species. The river-borne slit flourishes the delta with fertile aluvium, making it an ideal area for rice plantation, mangroves and swamp forests. The delta also functions asamigration spot for birds during the winter. Tourists can see migratory shorebirds, brown-headed gulls, Eurasian coots, and even ducks, geese and swans in this delta. Several species of mammals are also present in this delta in small and scattered populations. Asian elephants have decreased over the years, but tourists can still see them in their natural habitat at the delta. The southern part of the delta was dominated by saltwater crocodiles but like the elephants, the species have ceased in number and onlyasmall population remains. Apart from that, tourists can easily find the Malayan sambar deer, Indian hog deer and wild boars in reserved forests as these species flock the area. Other species that could be spotted in the delta include leopards, Bengal tigers, macaques, and even sea turtles.
HOME OF IRRAWADDY DOLPHINS
The dolphins are named after Ayeyarwady’s less-known name, ‘Irrawady’. These dolphins are known to haveaunique mutual relationship with fishers in the river. They would drive fish into fishers’ nets and be rewarded with some of the catch. This rare cooperation between dolphins and humans always leaves visitors in awe. Myanmar is one of the few countries that house the Irrawady dolphins and the country has extended its efforts to protect the species, including launchingacommunity-based tourism initiative. Activities in the programme include dolphin observations, boat trips, village tours, net-casting, and wildlife tours. As tourists observe how the locals fish with traditional fishing methods, the fishers would drum the side of their canoe to call out to the dolphins. The dolphins would come over and help them gather fish into the nets as well as surprise tourists withaplayful, leisure swim around the area.
The region is also known for its scenic beaches and resorts. The combination of pristine seawater, sandy beaches and sea breeze providesagreat holiday for those who love spending time at the beach. The charming beaches are alsoagreat resting spot for those who wish to take some time off their work. Ayeyarwady hasapopular resort that offers one of the best beach experiences in the country with multiple exciting activities for visitors of all ages. The beaches attract even the locals from other states and regions to enjoy comfortable stays in the resorts. The area is full with tourists who love to induldge in scrumptious meals while watching the sunset on the panoramic beach. Beach-goers can look forward to visiting more beaches in the region as the Government of Myanmar is exploring more beaches to boost the tourism industry. Less-known and secluded beaches will soon be connected to more common areas of the region. By adding electricity supplies along with bridges and roads, these untouched beaches will also be accessible by locals and tourists. Tourists can anticipate more luxurious guest houses and affordable hotel stays in these new areas.
ကမ်းခြေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် ငွေဆောင်အပန်းဖြေကမ်းခြေတွင် အားလပ်ရက်များကို ကုန်ဆုံးချင်ကြသည်။ ၎င်းအပန်းဖြေစခန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်း ဆုံး ကမ်းခြေများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ကြည်လင်သော ရေပြင်သည် ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ရေကစားရန် ဆွဲဆောင်နေသကဲ့သို့ ၁၅ ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသော ရေပြင်မှာ အမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားအားကစားနည်းများလည်း ပါဝင်လှုပ်ရှား အပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေသည် ပုသိမ်မြို့အနောက်ဖက် ကီလိုမီတာလေးဆယ် အကွာတွင် တည်ရှိ၍ ရန်ကုန်မြို့မှ ၅ နာရီကြာ ကားမောင်းခရီး အကွာအဝေးတွင် ရှိပါသည်။ ထင်းရှူးပင်၊ အုန်းပင်များနှင့် ကမ်းခြေသည် ထူးခြားလှပနေလျက် ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် နှစ်သက်ဖွယ် မြင်ကွင်း အလှတရားများနှင့် ပင်လယ်လေနုအေးများကို ခံစားစီးမျှောနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာ၍ လတ်ဆတ်ပြီး အရသာကောင်းမွန်သော ပင်လယ်စာ အစားအစာများ ရရှိနိုင်သည့် အပန်းဖြေ စခန်း အနီးအနားတွင် ရှိသော တံငါရွာများ၌လဲ ခရီးသွားဧည့်သည် အမြောက်အများ ဝင်ထွက် သွား လျက်ရှိပါသည်။
တစ်ချိန်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏မြို့တော် ပုသိမ်မြို့သည် အာရပ် ၊ အင်ဒီးယန်း ကုန်သည်များနှင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်ခဲ့ပါသည်။ ပုသိမ် ဟူသော ဝေါဟာရသည် ပသိုင် (မြန်မာပြန် အဓိပ္ပာယ် မူစလင်) မှ ဆင်းသက်လာသည် ဟုဆိုကြပါသည်။ ခရီးသွား ဧည့်သည်များသည် မြို့အနှံ့ ဘတ်စ်ကား၊ ရထား၊ လှေ တို့ဖြင့် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်လှပသော မြို့မှ အလွန်တစ်ရာ မျက်စိပသာဒ ဖြစ်စေသော ရေပြင်နှင့်အတူ ထည်ဝါလှသော မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းများက ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆို လျက်ရှိပါသည်။ ထိုမျှမက ပုသိမ်မြို့၏ ဂုဏ်ဆောင်ပုသိမ်ထီးလုပ်ငန်းကိုလည်း လေ့လာ ကြည့်ရှု့သင်ယူနိုင်ပါသေးသည်။
မော်တင်အငူမှ မော်တင်စွန်းဘုရားသည် ခရီးသွားရာသီဖြစ်သော ဖေဖော်ဝါရီလမှ မတ်လ အတွင်းတွင် ပွဲတော်များနှင့် အထင်ကရ နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကျော်ကြားပါသည်။မော်တင်စွန်း ဘုရားသည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် သဲပြင်ကမ်းခြေနှင့်အတူ တွဲဖက်လျက် ပင်လယ်နံဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဘုရား၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် ရေတို့ဖုံးလွှမ်းလျှက်ရှိပြီး ရေပေါ်တွင် တည်ထားသကဲ့သို့ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ရွှေမော်ဓောဘုရားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကြည်ညိုလေးစားသော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယမှ အသောကမင်းကြီး စတင်ကိုးကွယ်ပြီးနောက်တွင် အခြားသော မင်းကြီးများ ဆက်၍ လှူဒါန်းပူဇော်ကြပြီး အထပ်ထပ်ဖြစ်လာသည့်အလွှာများတွင် ရွှေ၊ငွေ ၊ကြေး စသည့် တန်ဖိုးကြီး လက်ဝတ်ရတနာများစွာ ပါဝင်နေသည်ကို ယနေ့ထက်တိုင် တွေ့ရှိရသည်။
ဘုရား၏နာမည်သည်ပြည်တော်ပြန်ဘုရားဖြစ်ပြီး စာပေကျမ်းဂန်များအရ နယ်မြေရပ်ခြားမှ ပြန်လာခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဘုရားကြေးဆင်းတုတော်ကြီးကို အင်္ဂလန်ကို ပင့်ဆောင်လာပြီးနောက် ဘုရင်မကြီးသည် အိမ်မက်ဆိုးများနှင့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားလာရသည်။ထို့ကြောင့် ဘုရင်မသည်မြန်မာပြည်သို့ ဘုရားဆင်းတုတော် ပြန်လည်ပို့ဆောင် ပေးခဲ့သည်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း နာဂစ်ကြောင့် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခဲ့သော မိန်းမလှကျွန်းအား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော နေရာဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လမုပင် ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးနေရာအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ နေရာ တစ်ခုလုံးတွင် လမုပင်များဝန်းရံလျက်ရှိပြီး ငှက်ကြည့်သော နေရာအဖြစ် ကျော်ကြားသည်။
မြန်မာလူမျိုးများ တန်ဖိုးထားသော မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ဒေသခံများသာမက ခရီးသွားဧည့်သည်များပါ အတူတကွပါဝင်ဆင်နွှဲကြသည်။ပူပြင်းလှသော နွေရာသီတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲသူတိုင်းသည် ရေလောင်းခြင်းဖြင့် ပျော်ရွင်စရာများ ဖန်တီးကြပါသည်။
မဂ္ဂပူဇာ(သို့)တပို့တွဲလပြည့်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရန်အတွက် ကျင့် ကြံအားထုတ်သောနေ့ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်ရက်အတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဘုန်းကြီးများနှင့် သီလရှင်များအားလှူဖွယ်ဝတ္ထုများ လှူဒါန်းပြီး အနည်းဆုံးနာရီပိုင်း (သို့)ရက်ရှည် ကြာမြင့် နိုင်သော ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုပွဲများ ကျင်းပခြင်းဖြင့် ပါဝင်ပူဇော်ကြသည်။
မြန်မာလူမျိုးတို့သည် လမ်းများတွင် မီးသီးများနှင့် ဖယောင်းတိုင်များထွန်းညှိပြီး နိဗ္ဗာန်မှ ပြန်ကြွလာသော မြတ်ဗုဒ္ဓကို ရည်မှန်း၍ ကြိုဆိုသော ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။စနစ်တကျ လှပစွာ ထွန်းညှိ ပူဇော်ထားခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် လူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်ရန် အသုံးပြုသော စောင်းတန်းများ အဖြစ် ရည်ရွယ်၍ ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။